विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा इङल्याण्ड र क्रोसिया भिड्ने, को कति बलियो ? - Naya Pusta
विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा इङल्याण्ड र क्रोसिया भिड्ने, को कति बलियो ?
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल आज इङल्याण्ड र क्रोसियाबीच हुदै छ । नेपाली समय अनुसार राति ११ः४५ बजे हुने यस खेलका विजेताले विश्वकपका उपाधिका लागि फ्रान्ससँग खेल्ने छ । क्रोसिया २२ बर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा खेलिरहेको छ भने इङल्याण्ड भने १९९० पछि पहिलो पटक सेमिफाइनलमा खेल्दै छ । यी दुवै देशमा क्रोसिया अहिलेसम्म विश्वकपको फाइनलमा पुगेको छैन भने इङल्याण्ड १९६६ मा विश्वकपको फाइनलमा पुगेर उपाधि नै जितेको थियो ।
इङल्याण्ड र क्रोसियाबीच यसअघि ७ खेल भएका छन् जसमा इङल्याण्डले ४ खेलमा जित हासिल गरेको छ भने क्रोसियाले २ खेलमा जित हासिल गरेको छ । त्यस्तै एक खेल बराबरीमा सकिएको छ । विश्वकपमा भने यी दुई देशबीच पहिलो पटक खेल हुदै छ ।
सन् १९९० सम्म युगोस्लाभियाको नामबाट खेलेको क्रोसिया त्यस यता यस पटक सहित पाचौ पटक विश्वकप खेलिरहेको छ । १९९८ को विश्वकपमा तेस्रो स्थान हासिल गर्नु नै अहिलेसम्म क्रोसियाको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो ।
अन्य तीन विश्वकप खेलमा भने समुह चरणबाट नै बाहिरिएको थियो । यस विश्वकपमा क्रोसिया अपराजित हुदै सेमिफाइनलसम पुगेको छ । समुह चरणका खेलमा नाइजेरियालाई २-० ले, अर्जेन्टिनालाई ३-० ले र आइसल्याण्डलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्रोसिया नकआउट चरणमा पुगेको थियो ।
नकआउटचरणको पहिलो खेलमा क्रोसियाले डेनमार्कलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-२ ले र क्वाटरफाइनलमा आयोजक रसियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-३ ले पराजित गर्दै यस विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।
सन् १९६६ को विश्वकप जितेको इङल्याण्ड १५औ पटक विश्वकप खेलिरहेको छ । १९६६ मा आफैले आयोजना गरेको विश्वकप जित्न सफल भएको इङल्याण्ड त्यसपछि भने फाइनलसम्म पुग्न सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : साफ महिला च्याम्पियनसिप : बंगलादेशलाई हराउँदै नेपाल बन्यो समूह विजेता
त्यसपछि १९९० मा सेमिफाइनलसम्म पुगेको इङल्याण्ड १९५४, १९६२, १९७०, १९८६, २००२ र २००६ मा क्वाटरफाइनलसम्म पुगेको थियो । गत विश्वकपमा समुह चरणबाट बाहिरिएको इङल्याण्ड १९३०, १९३८, १९७४, १९७८ र १९९४ को विश्वकपमा छनौट भएको थिएन । यस विश्वकपमा इङल्याण्डले समुह चरणका तिन मध्ये २ मा जित र एक मा हार बेहोरेको थियो ।
समुहचरणमा ट्युनिसियालाई २-१ ले, पानामालाई ६-१ ले जितेको थियो भने बेल्जियमसँग १-० ले हारेको थियो । त्यस्तै नकआउट चरणमा कोलोम्बियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-३ ले पराजित गरेको थियो भने क्वाटरफाइनलमा स्विडेनलाई २० ले पराजित गर्दै विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
चुनावको सबै तयारी पूरा, मतदानमा सहभागी हुन आयोगको आग्रह
नेविसंघको महामन्त्रीमा विजयी कुन्दन काफ्ले को हुन् ?
सँगै जीउने मर्ने कसम खाएका श्रीमानले नै जलाउने प्रयास गरेपछि